Liphi iQhosha elilandelayo? | Martech Zone
Liphi iQhosha elilandelayo?
Lwesine, ngoFebruwari 21, 2008 NgeCawa, ngoFebruwari 28, 2016 Douglas Karr
Ukusebenziseka yinzululwazi, kodwa ezinye zazo ziqhelekile. Ndikhumbula ndinempikiswano eninzi nabantu malunga nokusebenziseka xa ndisebenza njengoMphathi weMveliso. Kukho izinto ezithile ezinikiweyo- ezinje ngendlela amehlo alandela ngayo isikrini (ukusuka ekhohlo ukuya ekunene), indlela abalekela ngayo ezantsi, kunye nendlela abalindele ngayo isenzo emazantsi ekunene.
Akukho nzululwazi ininzi ibandakanyekayo, ezinye zezi zinto zombini ziziqhelo, kwaye ezinye zazo zihlala zijolise kwimikhwa yangaphambili yokuhamba kwi-Intanethi.
Ngokuhlwanje sinomhlobo wentombi yam, ndiye ndagqiba kwelokuba ndenze iodolo kwi-Intanethi Dominos. Iwebhusayithi yabo entsha i-zippy-ijongeka ngathi yiyo yonke iJava. Kuyamkholisa ngamehlo, kwaye kuyakhawuleza. Imnandi kakhulu kunePizza Hut okanye uPapa John's ... kwaye iyasebenza, ngokungafaniyo nekaDonato.
Re: I-Donato: Kwiinyanga kamva kwaye ndicinga ukuba bendinemizamo elishumi elinambini apho ndingakhange ndikwazi uku-odola ngenxa yendlela ebicotha ngayo okanye ngenxa yesiphoso esikhulu seNET.
Ndifumene umba omnye obonakalayo ngokusebenziseka kwendawo, nangona kunjalo. Jonga kule skrini kwaye ucinge ukuba uyayigcwalisa:
Emva kokuba ugcwalise ulwazi lwakho, amehlo akho alandelela- kwaye ulindele-ukuqhubela phambili kwiscreen esilandelayo ngokunqakraza ngasekunene. Kwafuneka ndikhangele umzuzwana ngaphambi kokuba ndifumane iqhosha elilandelayo. Ingqwalaselo yam yabanjwa liqhosha leKhuphoni kunye nensimu ngasekunene, ke kwaba nzima ukuyifumana.
Olunye utshintsho olulula lunokwenza eli phepha libe lula kwaye, ndiqinisekile, ukuphucula ukuguqulwa kwabathengi:
Ukuhambisa nje iqhosha ekunene, apho amehlo am aya kulandelela khona, iya kuba luphuculo olukhulu kunxibelelwano oluhle ngenye indlela. Ndiza kufumana umbala omtsha, mhlawumbi oluhlaza, ukubonelela ngokubonakalayo kuyo yonke into yokufaka isicelo ade umntu agqibe. Indawo ehambelanayo, umbala, kunye nokuqaqamba kuya kubonelela ngamava angenamthungo anokukhokelela abasebenzisi kule ndawo.
Ukongezwa okutsha kwindawo yeDominos yiPizza Tracker yabo:
Inxalenye ehlekisayo kukuba icandelo ngalinye liphuma lingena liphuma… kunye necandelo 5 (ukuhanjiswa) lelona candelo likhulu. Ngamanye amagama, iDominos inokuba yakha nje ifayili yemizuzu engama-30 enendawo eyoneleyo yokuhlala u +/- imizuzu eli-15 (uqikelelo lwam). Yinto ehlekisayo… kodwa iyasebenza.
Kukho unxibelelwano lokwenyani kwiphepha-igama lomqhubi wokuhambisa lalikhona apho ukufumana ingxelo kwangoko kunye nokuhlelwa. Ipholile!
tags: umazibuthe wabathengiUDan ZarrellaNxaxhebaUKipp BodnarUMaya Grinbergupapasho ndaba zekhampaniispemuungabhalisiIxabiso le-infographicyintoni infographic
Uyiqinisekisa njani indawo yakho ukuba yaBhaliswa ku-imeyile
Ukukhusela ubuntu bakho kwi-Intanethi
Feb 21, 2008 ngo-9: 13 PM
Kulungile, ngoku ndilambile…ukuba i-Subway izisiwe.
Feb 22, 2008 ngo-11: 51 AM
Abazisi, kodwa abambalwa kubo banokuodola kwi-intanethi. Asiyonkqubo entle, nangona kunjalo! Kuya kufuneka ndibhale incwadi ngemiba yokusebenziseka kwabo.
Feb 22, 2008 ngo-12: 40 PM
Andikwazanga nje ukulifumana iqhosha elithi “Okulandelayo”, xa ndilikhangela andizange ndiyeke ukutsalela amehlo am kwelo qhosha likhulu likhazimlayo elithi “KUKUPHONSI KWI-ONLINE”. Ukuba uza kuzijija kwindawo yeqhosha Elilandelayo/ikhonkco, ungazigrumbi nzulu ngokufaka iqhosha elibomvu elikhulu kwenye indawo kwiscreen.
Feb 22, 2008 ngo-4: 20 PM
Eli qhosha lilandelayo ngumba omkhulu. Ndikhe ndakwiindawo ngaphambili apho bekunzima kakhulu ukuzulazula (ngenxa yoyilo olubi) kangangokuba ndiye ndaphuma X'd.
Mar 20, 2008 ngo 12:22 PM
Ngokwenene ndinolwazi lwangaphakathi kule nto kwaye i-Tracker yinyani- izitshixo zenkqubo yokuodola yangaphakathi yeDomino abayisebenzisayo ukulandelela ukusebenza kakuhle. Ngokwenene ichanekile +/- 40 imizuzwana.